I-Monemvasia, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Monemvasia
Bukela ividiyo mayelana neMemvasia
Hlola iMonvasvasia idolobha elisophahleni olukhulu esiqhingini esincane i-100m ngaphezulu kwezinga lolwandle eningizimu yePeloponnese e- Greece. Lesi siqhingi sixhumene nezwe ngomgwaqo omfushane u-200m ubude. Iphakeme nge-300 m ububanzi ne-1 km ubude, futhi isiza senqaba enamandla yangezikhathi zasendulo. Izindonga zedolobha namasonto amaningi aseByzantine ahlala kusukela esikhathini sangezikhathi zakudala.
Idolobhana nenqaba yasungulwa e-583 izakhamizi zasendaweni enkulu eziphephela ekuhlaseleni kweSlavic yaseGrisi.
Isiqhingi saseMonemvasia sahlukaniswa nezwe nokuzamazama komhlaba ku-375 AD. Idolobhana elisha elinegama elifanayo lakhiwa emthambekeni oseningizimu-empumalanga yedwala, elibheke e-Monemvasia bay. Imigwaqo eminingi imincane futhi ilungele ukuhamba kwezinyawo nezimbongolo kuphela
E-1971, iMonvasvasia yaxhunyaniswa nomhlaba wonke ongaphandle ngebhuloho elisentshonalanga.
Idolobhakazi laseMonemvasia liphakathi kwezindawo ezihlaba umxhwele kakhulu kuzo Greece nendawo yokuvakasha ethandwa kakhulu.
Izakhiwo zangezikhathi zakudala sezibuyisisiwe, futhi eziningi zazo zaguqulwa zaba amahhotela.
Idolobha Elidala empeleni lingukubona okukhulu kweMonemvasia. Leli idolobhana elihle leMedieval eliqoshwe ngokuphelele emithambekeni yamatshe, linikeza umbono olwandle owesabisayo ukusuka endaweni ephakeme kakhulu. Izindawo eziningi ezindala eMonemvasia Old Town ziphenduke amahhotela, izindawo zokudlela nezitolo namuhla. Ukuhamba uzungeze iCity Town kungukuhambela okwedlule.
Yindawo encane nethe ukuthula kanjena izinto okufanele zenziwe eMonvasvasia zikhawulelwe. Isifunda silungele ukuphumula ngokuphelele ebhishi noma emaphandleni.
EKato Poli yima ikofi kumgwaqo omkhulu e-Agora. Umgwaqo unamakhefu amaningi, izitolo nezindawo zokudlela.
Kwasemini zama emathawa olwandle. Ebusuku jabulela ukunambitheka kwendabuko ezindaweni zokudla ezinkudlwana kanye nesiphuzo ngaphansi kwezinkanyezi emigoqweni eminingi.
Ku-Pano Poli ungabona izindawo zokuhlala zaseVenetian
Uma ungumuntu ohamba ngezinyawo ujabulele izindlela eziningi zakudala eziwela esifundeni eziholela kuma-chapel amancane, izindawo ezincane, amabhishi acashile kanye nezintaba ezinokubukwa okubabazekayo olwandle. Ukuhamba ngezinyawo kuhamba kahle ekwindla nasentwasahlobo lapho isimo sezulu singashisi khona. Ehlobo, ukuhamba ngezinyawo isikhathi eside kungakhululeki ngokuthula.
Uma sekukhona amasonto wesitayela se-40 byzantine kepha manje i-24 isasele kuphela
ISonto lika-Agia Sofia
ISonto lika-Elkomenos Christos
ISonto lePanagia Chryssafitissa
Neminyuziyamu yesintu ye-2
kufanele uzame ama-pastries enziwe ngezandla asendaweni abizwa ngokuthi ama-goge nama-saite. Futhi ungakhohlwa ukuzama iwayini elimnandi elibizwa ngokuthi iMalvasia.
Eminyakeni embalwa edlule, ngoJulayi 23, kube nomgubho woSuku lokuzimela ethekwini elikhulu.